दार्चुला घटना: भारतको दबावमा देउवा सरकार, प्रतिवेदन आउनेमै आशंका ! – Classic Khabar
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि सांसदहरुले प्रश्न गरे खोई दार्चुला घटनाको छानविन समितिको प्रतिवेदन ? १० दिनको प्रतिवेदन दिने गरी बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन ३० दिनसम्म किन आएन ? जवाफमा गृहमन्त्री खाँणले भने ‘छानबिन समितिमा रहेका दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्ट आफन्तको उपचारका निम्ति भारतको दिल्ली जानु भएको छ ।
उहाँले अझै २÷४ दिन आफू भारतमै रहने जानकारी इमेल मार्फत गराउनु भएको छ ।’ समितिका अर्का सदस्य राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक हुतराज थापाले आफन्तको निधन भएका कारण बिदामा बस्दा प्रतिवेदन तयार हुनमा ढिलाइ भएको उनले बताए । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
दुई सदस्य बिदामा बसेकै कारण छानबिन समितिको म्याद थपिएको भन्दै गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘हिजो केही समय थप गरेका छौं र हामीलाई विश्वास छ उहाँहरुले सत्यतथ्य छानबिन गरेर तथ्यकै आधारमा रिपोर्ट बुझाउनु हुनेछ ।’ गृहमन्त्रीको जवाफ सांसदहरुले पत्याएनन् । ‘छानबिन समितिले काम गर्दै थियो ।
एउटा दिल्ली भागे, अर्को कहाँ‘’ एमाले सांसद पण्डित भन्छन्, ‘तीन पटक म्याद थपिसक्नुभयो । फेरि कति म्याद थपिनुपर्ने हो रिपोर्ट आउन ?’ सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले छानबिन समितिका सदस्य बिदामा बसेका कारण प्रतिवेदन आउन ढिला भयो भन्न नमिल्ने बताइन् । अरु सदस्यहरुले पनि दुई देशको सिमानामा भएको घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिका सदस्यलाई घर बिदामा बस्न दिन मिल्छ भन्दै प्रश्न गरे ।
गृहमन्त्रीले भने प्रष्ट जवाफ दिएनन् । ‘छानबिनलाई तीव्रता दिन्छौं र प्रतिवेदन यथाशीघ्र आउनेछ भन्ने विश्वास तपाईंहरुलाई दिलाउन चाहन्छु’, उनको जवाफ छ । छलफलपछि राज्यव्यवस्था समितिले दार्चुला घटनाबारे ‘कूटनीतिक पहल गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु’ सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णयको ड्राफ्ट तयार पा¥यो । समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले प्रस्तावको मस्यौदा पढेर सुनाइन् ।
तर गृहमन्त्री खाँणले ‘कूटनीतिक पहल गरी दोषीलाई कारबाही गर्नू’ भन्दा दोषी पत्ता लागिसकेको भन्ने अर्थ लाग्ने भएका कारण यसरी किटान गरेर समितिले निर्देशन दिन नहुने बताए । जवाफमा समिति सभापति र समिति सदस्यहरुले छानबिनमा रहेको विषयमा किटान गर्ने समितिको मनसाय नरहेको बताए ।
तथापि कूटनीतिक पहल नगरी यो समस्या समाधान नहुने भएकाले समितिले कूटनीतिक पहल गर्नू भनेर सरकारलाई निर्देश गर्नुपर्ने बताए । समिति सभापति श्रेष्ठले सरकारलाई सहयोग गर्ने आफूहरुको मनसाय रहेको भन्दै ‘आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नू’ भन्ने लेख्ने प्रस्ताव गरिन्, जुन पारित भयो । समितिले दार्चुला घटनाबारे यथाशीघ्र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र घटनाको सम्बन्धमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न’ निर्देशन दिइएको छ ।
Prevमलाई कर णी गर्न भन्दा अघि उनीहरुले…..
Next‘मेरो बुढीको गो’प्य अं’गको फोटो त्यो मान्छेको मोवाईलमा कसरी गयो’, भेटियो थुप्रै प्रमाण (भिडियो)
५६ बर्षका बुबाले सौतेनी आमा ल्याएपछि छोरीहरु रुँदै आए मिडियामा